TINCTURE XABBAD: DIYAARINTA, GURYAHA, DAAWOOYINKA, CONTRAINDICATIONS - SOOSAARKA DALAGGA
Cusbaarinta iyo lafaha kareysa waa geedo caadi ah. Bini'aadamku wuxuu adeegsanayay diyaargarow ku salaysan tan iyo wakhtiyadii hore, mana ay lumeen xidhiidhkoodii iyo caalamkaba ilaa maanta. Waa maxay qarsoodi ah warshad cagaaran, iyo sida loo diyaargaroobo tincture guud ahaan, kaas oo aad ka saari karto calaamado kala duwan iyo la dagaallama cudurrada badan, waxaan u sheegi doonaa maanta.
Qaybta kor ku xusan ee peppermint waxaa ku jira saliid lagama maarmaanka ah, caleenta - qiyaastii 3%, oo ku jirta inflorescences - laga bilaabo 4 ilaa 6%, iyo cagaha - 0.3%. Saliiddu waxay ka kooban tahay menthol (qiyaas ahaan 70%) iyo qiimeeyayaasheeda. Sidoo kale dhirta waxaa ku jira xeryahooda tanning, reins, carotene, asiidh baruur iyo dufan, saponins dhexdhexaad ah, rutin, arginine iyo betain. Maydhaas sidoo kale waxa ku jira fitamiin A, B, C, iyo PP, iyo sidoo kale kuwa yaryar iyo macruufiyeyaasha, sida kalsiyum, potassium, sodium, fosfooraska, magnesium, manganese, birta, zinc, iyo copper.
Ma taqaanaa? Dhanka qadiimka ah ee Roma, naaskuna waxa loo isticmaalaa sida cadar, sidoo kale waxaa lagu riday barkimo hurdo wanaagsan.
Guryaha waxtarka leh iyo kuwa la daweeyo ee lebbiska
Waxyaabaha kiimikada kiimikada hodan ah waxay siinaysaa dhirta farshaxanada badan ee dhirta, oo ah dhirta:
Wuxuu aaminsan yahay xiisadda, daal, cidhiidhi, xanuunada dareenka.
Waxay xoojisaa xitaa socodka.
Waxay hagaajisaa wareegga dhiigga.
Caadi ahaan dheefshiidka.
Waxay kicisaa xargaha mindhicirka.
Kordhinta kursiga caadiga ah ee kursiga.
Waxaa loo isticmaalaa suuxdin fudud.
Waxay kordhisaa dhaqdhaqaaqa maskaxda.
Waxay leedahay saameyn faa'iido leh oo ku xidhan xididdada dhiigga iyo halbowlayaasha.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhibaatooyinka afka ee afka.
Kalluunku ma dhaawici karo jidhka, laakiin isticmaalkiisa waa in laga tagaa xaaladaha noocaas ah:
Iyadoo leh sharaf darro shakhsiyeed.
Iyada oo xididdada varicose.
Iyadoo cadaadiska dhiigga yar yahay.
Ilmaha ilaa 3 sano.
Dumarka u qorsheynaya uur-qabasho waa mamnuuc haddii ay jiraan dhibaatooyin la qabsasho.
Ragga waa in ay isticmaalaan qashinka iyo daroogada oo ku salaysan xaddad xadidan, sida dhirtu hoos u dhigto libido.
Waa muhiim! Warshadu waxay keenaysaa lulmood, sidaas awgeed waa in loo taxaddaraa dadka ay shaqadooda u baahan yihiin.
2 cunto karinta
Tincture peppermint waxaa laga iibsan karaa farmashiyaha ama adiga ayaa diyaar ah. Aan fiirino sida loo diyaariyo daroogada guriga.
Wixii diyaarinta tincture khamri ayaa u baahan doona:
cusub ama qallalan qallalan - 100 g;
vodka ama aalkolo (70%) - 400 ml.
Alaabta ceymiska waa in lagu meeleeyaa weelasha galaaska, ku shub khamriga ama vodka oo u dir meeshi madow, oo qabow 10-14 maalmood. Markaas faleebo waxaa lagu sifeeyey iyada oo loo maro cheesecloth oo lagu keydiyo weel dabool leh, meel laga ilaaliyo iftiinka qorraxda.
Akhriso sida loo sameeyo tincture of propolis, whisker dahabka, Rhodiola rosea (xidid dahab), malayga, maleyshaha, karraaniga, blackfruit (chokeberry madow ama Rowan madow), plomme, geed lows, sabelnik iyo currant madow.
Si aad u diyaariso faleebo biyaha, waxaad u baahan doontaa:
lippermint (qalajiyey) - 1 tbsp. l.
Waxaa lagama maarmaan ah in alaabta ceeriin ku jirta weel ku shub biyo karkaraya. Ka dibna suxuunta ku rid barkadda biyaha oo isku kari dabka kulaylka 10-15 daqiiqo. Maraq udgoon oo shaandho leh iyada oo loo marayo shaandho ama hilib. Ku kaydi faleebada biyaha qaboojiyaha ku jira weel dhalada, daboolka si adag u xiran.
Isticmaal daawada dhaqameed
Tinctures ka mid ah caleen this muddo dheer ayaa lagu guuleystay in daawada dhaqameed. Iyada oo gargaarkooda, waxaad ka takhalusi kartaa hargab, madax xanuun, hurdo la'aan iyo waxyaabo kale oo badan. Aan eegno sida loo isticmaalo daroogadaas cudurro kala duwan.
Tincture Biyaha xiniinyaha ayaa lagu muujiyey infakshanka fayruuska ee neef-mareenka iyo hargabka sida nuugista. Si aad u fuliso nidaamka, waxaad u baahan tahay in aad ku shubtid digsi yar oo biyo ah oo kariyaha ku jirta oo isku karsaaraya. Markuu biyuhu bararaan, dabka demi oo ku dar 1 tbsp. l tinctures. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku tiirsato surka si ay wejigu 30-40 mitir u karkaraan biyo, ku dabool madaxaaga tuwaal oo ku neefso jajabka bogsashada 10-15 daqiiqo.
Geedaha sida verbena officinalis, anemone (anemone), nutmeg, amaranth, linden, basasha, geedka, kupena, raspberries, iyo dhirta cagaarka ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona daaweynta hargabka.
Nidaamkani wuxuu kaa caawin doonaa yaraynta xaaladda guud ee hargabka, caabuqyada fayraska ee neefsashada iyo boronkiitada, neefsashada, iyo sidoo kale xanuunka iyo bararka cunaha.
Madax xanuun iyo miyir-doorsoon
Tincture khamriga ee dhirta ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso madax-xanuun iyo miyir-doorsoon. Waa ku filan in la xoqdo dhowr dhibcood oo daawada ah oo ku soo gala gobolka ku meelgaarka ah, wejiga iyo dhabarka madaxa 3 jeer maalintii oo leh dhaqdhaqaaqa duugista. Qalabka wuxuu naaqusayaa casiraadyada, qaboojiyaha iyo quraacda, iyada oo gargaarkeeda aad si deg-deg ah iyo si joogta ah uga soo kaban karto madax-xanuun iyo murgacasho.
Laga soo bilaabo daal
Haddii dhamaadka maalinta aad dareentid sida liin qasacadaysan, faleebada biyaha ee dhirta ayaa sidoo kale iman kara badbaadinta. Waa ku filan inaad cabto 200 ml oo cabitaanka saafiga ah saddex jeer maalintii kahor intaadan cunin, waadna illoobi doontaa waxa daalku yahay.
Laga bilaabo lalabada
Haddii lallabo waa mid ka mid ah calaamadaha sunta sunta ee haweenka uurka leh, waa in aad cabtaa 2 qaaddo oo ah faleebada biyaha nuskiiba ilaa laba saacadood kasta. Iyo haddii calaamadan aan fiicnayn u muuqato sababtoo ah diiqada ama sunta cuntada, ka dibna faleebada biyaha waa la cabi karaa 250 ml 3 jeer maalintii. Oo labadaba, waa wax aan loo baahnayn in lagu daro sonkorta cabitaanka, sidii munaasabada ugu dambaysa, waxaad ku macaaneyn kartaa malab.
Laga soo bilaabo hareeraha
Tincture alkolada waxaa loo isticmaalaa si loo yareeyo khamriga khamriga. Dhibaatada waxaa ka mid ah menthol, oo si deg deg ah uga caawisa sidii ay ula qabsan laheyn. Waxaa lagama maarmaan ah in la jaro 20 dhibcood oo sheygan ah galaas biyo ah, iyo dhowr daqiiqo oo dhan calaamadaha aan fiicneyn way baxayaan.
Waa muhiim! Bukaanjiifka qaba khamriga ba'an ayaa lagula talinayaa inay qaataan dib-u-dhigis xoqin, taasoo ciriiri doonta calaamadaha maqnaashaha, oo ay ka mid tahay qaadista murqaha muruqyada, iyo sidoo kale caadiyan wadnaha garaaca wadnaha.
Wixii hurdo la'aan ah
Si looga takhaluso dhibaatooyinka hurdada, waxaa lagama maarmaan ah in la cabo 100 ml oo ah maraq boogta ah 2-3kii usbuucba maalintii 2-3 jeer maalintii. Haddii qulqul-darradu ay ka timaaddo cadaadiska ama feejignaanta oo aan dhibaato joogto ah, waxaad ku daadin kartaa 20 dhibcood oo tincture ah oo ku jira galaas biyo ah ka hor intaadan sariirta aadin.
Si loo yareeyo bararka daboolka afka
Afka ku luqluqo biyo diirran oo lagu daro 20 dhibcood oo ah tincture peppermint ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso stomatitis iyo habab kale oo barar ah. Nidaamka waxaa la fuliyaa 2-3 jeer maalintii.
Waxa intaa dheer in peppermint, geeddi socodka bararka ayaa sidoo kale ku talinaynaa xidid cas (Hedysarum halmaamay), yarrow, lungwort, biloba ginkgo, kalanchoe, irgu kalamus dhiiqo, ivy, kirkazon (aristolohiya), ee xikmadda (candhuufta) pratense, propolis iyo broccoli.
Decoction ah ee warshad, diyaarisay 1: 1, waxaa loo isticmaalaa for cadaadiska. Caleenta suufka ah ama faashad ku qoyan dareeraha bogsashada, oo ku soo rogaya meelaha bararsan iyo ka baxsan 5-10 daqiiqo.
Iyada oo la kordhiyo oo aysidhka ee caloosha
Si loo yareeyo aashitada waxay gacan ka geysaneysaa isticmaalka faleebada biyaha geedkaan. Wixii diyaarinta, waxaad u baahan tahay inaad ku shub 5 g oo ah walax cayriin leh 200 ml oo biyo ah karkaraya iyo ha u diyaarso 15-20 daqiiqo. Ka dibna ku nadiifi dareeraha iyo cabin 1 tbsp. l 3 saacadood kasta.
Iyadoo aysidhka hooseeyo, khabiirada daawada dadku waxay soo jeediyaan qaadashada faleebada biyaha, diyaarinta taas oo aad u baahan tahay 1 tbsp. l qallalan qallalan iyo 200 ml biyo karkaraya. Maaddooyinka qashinka waxaa lagu shubay biyo waxayna u dhexeeyeen saacad. Waqtiga ka dib, shaandho oo cab 25 ml 5 jeer maalintii.
Faafinta biyaha ee xajinta ayaa ka caawisa sidii loo xakameyn lahaa xaalada arthritis iyo arthrosis. Xaaladahaas oo kale, waxaa lagu daraa qubeyska. Si aad u diyaarsato daroogada noocan oo kale ah, maadada ceeriin ah ayaa lagu shubay biyo karkarin ah 1: 3 oo la kariyey kuleylka kulaylka 20 daqiiqo. Markaas maraq waa in loo oggolaadaa inay soo dhajiso 30 daqiiqo, cadaadis iyo ku daadi biyo diirran. Waa lagama maarmaan in la qaato qubayska 2-3kii toddobaadkii 10-15 daqiiqo.
Waa muhiim! Marka cambaarta, cudurka psoriasis, finan xasaasiyadeed iyo maqaarka qalalan waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la qubaysto oo lagu maydho maro cusub. Cuntada ayaa maqaarka kor u qaadeysa oo joojiya caabuqa.
Si caadi u ah heerarka sonkorta dhiigga, kor u qaad codka jirka iyo xoojinta nidaamka difaaca, khubarada beerta daawada dabiiciga ah ayaa dejiya badeecadda biyaha ee loogu talagalay bukaanka qaba sonkorowga. Diyaarinta cabitaanka bogsashada waa mid aad u fudud: waxaad u baahan tahay inaad qaadato 5 g caleemaha la qalajiyay ee jaale ah, ku shub 200 ml oo biyo ah karkariyo iyaga oo u diyaari 15 daqiiqo. Kadibna waxaad ku shaandhaa maraq iyo cabitaan meeshii shaaha 1-2 jeer maalintii.
Arjiga kalluunka qurxinta
Ka sokow xaqiiqda ah in dhirtu ka caawiso inay la qabsato cuduro kala duwan, waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo qurux iyo ilaaliyo maqaarka dhalinyarada. Noocyada kala duwan ee rinjiga guriga ayaa ah mid aad u ballaaran, waa qayb ka mid ah kareemka, kiriimyada, maskaxda iyo looska.
Qalabkani wuxu gacan ka geysan doonaa hagaajinta xaaladda iyo midabka maqaarka, ka takhalusi burooyinka yar yar, xanaaqa iyo finanka wajiga. Si aad u diyaariso kareemka waxaad u baahan tahay inaad qaadato 3 tbsp. l qallalan qallalan, ku shub 1 koob oo biyo karkaraya oo baxo 25-30 daqiiqo. Waqtigaas ka dib, dareeraha waa la gooyaa oo ku shubaa weel nadiifa oo dabool leh oo dabool leh. Aroortii iyo fiidkii waxaa lagama maarmaan ah in la tirtiro wejiga iyo qoorta suufka lagu rusheeyo ee lotion. Natiijadu ma qaadan doonto waqti dheer si aad u sugto - maqaarkaaga ayaa isbeddela, midabkiisu wuxuu noqonayaa mid isku mid ah, finan iyo barar ayaa baabi'in doona oo dhalaalaya caafimaad leh ayaa soo bixi doona. Video: tincture peppermint for koritaanka timaha iyo xoojinta
Si loo wanaajiyo xaalada maqaarka dhibaatada leh, firiiricyo adag iyo xanaaq ayaa kaa caawin doona cadaadiska ka yimaada caleemaha cusub. Nidaamku wuxuu u baahan yahay dhowr nooc oo dhir ah oo dhir ah oo dhir ah, kaas oo ah in lagu qooyay qadar yar oo biyo kulul ah 15-20 daqiiqo. Caleemaha qafiifka ah waxay ku soo rogaan maqaarka cudurka qaba, iyo dusha sare ayaa lagu daboolay maro jilicsan oo lagu daro shaah yar. Cadaadiska ayaa wejiga wajiga loogu talagalay 10-15 daqiiqo, ka dibna maydhin biyo qabow. Nidaamka waxaa lagula talinayaa in aan ka badneyn 1-2 jeer toddobaadkii.
Tixgeli noocyada ugu caansan ee lafaha, iyo gaar ahaan basbaaska iyo xajmiga.
Isugeynta tinctures kale
Ka sokow xaqiiqda ah in daawooyinka qaliinka ku salaysan ay si aad ah waxtar ugu yeeshaan, waxay saameyntooda ku dari karaan ama la kordhin karaa iyadoo la adeegsanayo diyaarinta dhirta kale.
Iyadoo leh Corvalol
Haddii aad isku qasdo tincture of Corvalol iyo qashinka, waxaad heli doontaa dejiye weyn si looga caawiyo ka soo kabashada cadaadiska iyo caadi u hurdo. Isku dariddu waxay sakhraan 2-3 jeer maalintii, 10-30 dhibcood, kuwaas oo lagu kala diro biyo ama lagu daro sonkorta lagu nadiifiyey.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay fikradaha Ruushka, haddii aad soo ururiso ka dib maalinta Saddexmidnimada iyo barkin hoosteeda, ka dibna riyo ayaad arki kartaa baali ama shiil.
Iyada oo Eucalyptus
Tandem Tani waa mid ku habboon daaweynta dhuunta iyo cudurada neefsashada. Labada dhirta waa anti-barar, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa isku-dhafan si loo daweeyo xuub-ba'an, bronchitis iyo ARVI. Isku dar ah tinctures oo afka laga qaato 1 tsp. saddex jeer maalintii ka hor inta aan la cunin ama lagu qasi karin biyo kulul iyo qashinka.
Marka la isku qaso tinctures ee jejebiyaha iyo haweenkaba ee saamiga 1: 4, waxay soo baxaysaa soo dejiye, kaas oo lagula taliyay khabiirada beerta daawada dhaqanka si loo yareeyo neurosis, daaweynta niyadjabka iyo hurdo la'aan. Daawada waxaa la qaadaa 15-30 dhibcood ka hor wakhtiga jiifka. Isku dar ah tinctures kuwaas oo keena lulmo, sidaas darteed laguma talinayo in ay qaataan maalintii.
Sidee loo naqshadeeyaa
Warshad waxaa la ururiyaa inta lagu jiro xilliga ubax, kaas oo dhacaya dhamaadka Juun iyo bilowga July. Sprigs ama caleemaha ka mid ah caleemaha waa in la gooyaa ee hawada qorraxda qorraxda. Waa in la ogaadaa in caleemaha yar yar ay ka liidato dhadhanka dhadhanka oo badan, laakiin tani ma saameynayso hantidooda faa'iido leh. Caleemaha waxaa lagu dhajiyay dusha qolka oo la qalajiyey meel diiran oo diiran, oo laga ilaaliyo qorraxda tooska ah.
Haddii aad rabto in aad naaso cusub sameyso xilliga jiilaalka, ogoow sida loo qalajiyo loona xakameeyo rafaadka guriga.
Shinni ayaa loo xirxiraa oo la qaboojin karaa qallalan, qolal fiican oo hawo leh. Ka dib qalajinta, naasku waa la jajabiyey oo waxaa la geliyaa bacaha dharka dabiiciga ah ama weelasha hawada oo lagu keydiyay meel qallalan oo qoyan. Nolosha khudradeed ayaa ah 2 sano. Hadda waxaad ogtahay in tinctures ee lebbiska caawiyo in laga takhaluso cuduro badan, iyada oo aan isticmaalin daroogada kiimikada. Laakiin inkastoo ay asal ahaan khudradda sida daroogada, hadaba, waa inaad la tashatid takhasus leh kahor intaadan qaadin. Tani waa lagama maarmaan si looga fogaado dareen-celin xumo, iyo sidoo kale si gaar ah u doorto qiyaasta.
Faallooyinka ka soo shabakad ah tincture ah naas
Waxaan iibsanaa tincture of warshadda Tula daawada Tula si joogto ah ee farmashiga ugu dhow ee magaalada our. Waxay u qalantaa 25 ml oo tincture ah oo kaliya 12 RUB.
Ka iibso adigoon warqad dhakhtar kuu qorin. Faa'iidooyinka roodhida ayaa muddo dheer la ogaaday in badan oo naga mid ah, laakiin waxaan leeyahay dabeecad qaas ah oo ku wajahan.
Waxaan jeclahay tincture peppermint kaliya inay cabto shaaha, gaar ahaan madow.
Inta lagu jiro madax xanuunka madax-xannuunsan, waxaan isku daraa dhawr dhibcood oo tincture ah oo leh qadar yar oo biyo ah. Dhamaan biyo ayaan ku dhaqayaa.
Waqti markii aan dareemo xanuunka jarjaran ee qarsoodi ah ee qaybta sare ee caloosha (mararka qaarkood waxay dhacdaa marka aan cuno wax waxyeelo leh), ka dibna isla tincture of peppermint yimaado ii badbaadiyey ...
Marka laga soo tago dhammaan kor ku xusan, jamacadu waxay si fiican u saartaa daalka la isku ururiyey iyo walbahaarka dareenka.
Waxaan kale oo aan kugula talin karaa adiga, asxaabteyda, tincture xayiraadda xayawaanka ku jira xabadkaaga daawada guriga ...
Waxaan soo iibsaday tincture peppermint si loo yareeyo halsano ee caloosha ka dib markii tufaax. Caano gacmaha, laakiin mararka qaarkood iyaga ayaa caloosha ku jira si ay u wareegaan. Waxay ahayd markaa nastochka tani waxay iga caawisay. Muddo ka dib, waxaan bartay inaan yareyno. Waxyaabaha qaarkood waxay keeneen sunta sunta. Sidaa darteed waxaan xusuustay ka dibna rinjiga miraha aan. Waxaan tuuray toban dhibcood oo biyo ah waxayna qaadatay. Dhammaan dareenka aan fiicneyn ayaa soo noqnoqday. On top of taas, tincture this, waxaa jiray ur wanaagsan oo afka ah. Sida haddii aan isticmaalo dharka gacmaha. Waa mid tafaasiil ah oo aan qaali ahayn, waxaana jira shaki ah faa'iido weyn.
Maalin wanaagsan dhammaan. Mintadayda waan ku faraxsanahay. Marwalba waxaan ku dhufanayaa aagahayga. Waxaan kaydiyaa kaydka jiilaalka, iyo sidoo kale, iyo tincture, sidoo kale (xaaladaha degdegga ah) waxay ku jirtaa xirmada gargaarka degdegga ah. Waxaan bilaabay in aan isticmaalo (!) Laba sano ka hor, markii aan la silcin jiray sun ah sunta ah, iyo waxay badbaadisay. Kadib sanooyin badan, dhibaatooyinka dabeecad ka duwan ayaa bilaabay digniin: calool xanuun caloosha - tincture this caawin doonaa, lallabbo, matag - 10-15 dhibcood iyo dhibaatada la xaliyo. Badanaa waxaan ku luqluqdaa afkeeda iyo cunaha, waxayna caawisaa iyo urka laga tirtiraa. Yaa aan lahayn madax xanuun? Isku day inaad xoqdo, hubso inaad caawiso. Sidaa daraadeed, waxaa kale oo loo isticmaalaa labadaba gudaha iyo dibadaba. Cunuga ayaa loo tuuray raashin, laakiin halkan waxaa jiri kara falcelin xasaasiyadeed. Qiimaha Dooliga.